War | Xaysimo | War deg deg ah | Page 2
Sida ku xusan xogta Global FirePower, Iceland waxa ay shacabkeeda ka heli kartaa 81,474 qof oo awood u leh inay militeri noqdaan. 48,070 ka mid ah dadkaas waxay xilli kasta diyaar u noqon karaan in loo qoro ciidanka qalabka sida. Sanad walba waxaa da’da militeriga soo gaara 1,779 ruux.
“Waxaan geli doonnaa dagaal uu wax kasta ku baxo, waxaana dagaallami doonnaa ilaa dhammaadka, taasi waa waddada kaliya ee u furan Shiinaha,” ayuu sii raaciyay hadalkiisa.
Qoraalka sawirka,Madaxweynaha Mareykanka Joe Biden
Qoraalka sawirka,Shiinaha waa waddanka ugu milatariga badan guud ahaan caalamka
Shiinaha waa waddanka labaad ee dhaqaalaha ugu badan ku bixiya milatariga, isagoo sanadkiiba u adeegsada $261 bilyan, sida uu shaaciyay Machadka Caalamiga ah ee Cilmibaarista Nabadda ee Stockholm.
Shiinaha waa waddanka saddexaad ee ugu sarreeya dhinaca awoodda diyaaradaha dagaalka, wuxuuna heystaa 3,210 diyaarad.
Shiinaha ayaa heysta taangiyo ay tiradoodu gaareyso 3,200, halka gawaarida gaashaaman ee uu heysto lagu qiyaasay 33,000, sida lagu xusay xog uu soo bandhigay bogga isbarbardhigga ku sameeya cududda milatari ee dalalka caalamka ee Global Firepower.
Diyaaradaha Dagaalka ee Ruushka iyo NATO oo hawada Yurub isaga hor yimid
Wasiirrada Gaashaandhigga ee dalalka xubnaha ka ah Isbahaysiga NATO ayaa shir isugu imaanaya si ay uga arrinsadaan gargaarka militeri ee Ukraine.
Dhoollatuskii ugu waynaa ee ka dambeeyay xilligii Dagaalki Qaboobaa ayay waddamada ku jira NATO ka wadaan meel u dhow Ruushka.
Wariye ka tirsan BBC-da oo lagu magacaabo Nafisa Kuhnavard ayaa qabatay sawirro muujinaya diyaaradaha dagaalka ee NATO oo ku wajahan hawada Yurub oo ay dhinaca kale ka joogaan militeriga Ruushka.
Mas’uuliyiinta NATO ayaa sheegay inay ku howlan yihiin gaadda ka ciyaarkii militeri ee ugu waynaa ee ay sameeyaan kaddib dagaalkii qaboobaa. Ilaa 50 diyaaradood oo ay leeyihiin waddamada xulafada ah ayaa isugu tagay difaaca hawada ee Bariga Yurub.
Arrintan ayaa lagu tilmaamay mid mug wayn leh, dadka qaarna waxay sheegeen in taariikhdii hore aan laga soo tagin. Ruushka ayaase ah quwadda ugu wayn ee halkaas ku sugan ilaa hadda.
Muuqaal laga soo duubay gaashaanbuurta uu hoggaaminayo Mareykanka ee dhoollatuska samaynaysa ayaa laga arkayaa duuliye u dhashay waddanka Czech, oo la yiraahdo Mikhail Danek, kaasoo u muuqda inuu yahay atoore filim jilaya. Laakiin tani waa xaalad dhab ah oo ka fog filim jilitaan.
“Dhoollatuskan militeri ayaa noqday mid lama filaan ah. Diyaarad aan la garanaynin cid leh ayaa kusoo dhawaatay saldhigga ciidamada cirka ee NATO.
“Diyaaradahan ayaa ka hor istaagayay waddadeeda iyo in ay dib u laabato,” ayay tiri wariyaha BBC-da, Nafisa Kuhinur.
Saraakiisha NATO ayaa markii dambe dhacdadaas usoo tabiyay BBC-da. Waxay sheegeen in ay ahayd diyaarad uu leeyahay Ruushka.
Sawirro laga qaaday gudaha diyaaradda uu waday Mikhail ayaa muujinaya sida uu ugu dhawaaday inuu joojiyo diyaaradda Ruushka.
Xilli ay meel aad u xun marayso xiisadda u dhaxaysa Ruushka iyo NATO, khalad yar ayaa hor seedi kara dagaal aad u wayn.
Inkastoo hubka oo dhan uu bannaanka yaallay, ma jirin qof ku faraxsan.
Militeriga waddanka Lithuania oo qayb ka ah dhoollatuska NATO ayaa tijaabo ku samaynaya difaacooda dhinaca dhulka ee ka hor tagaya duqaymaha diyaaradaha.
Dowladahan loo yaqaanno Baltic-ga ayaa ku yaalla meel u dhow Ruushka, waxayna xubno ka yihiin gaashaanbuurta NATO.
“Xaaladda hadda taagan ma aha mid ku filan in lagu joojiyo Ruushka ama jawaabta daqiiqadaha ugu horreeya la bixiyo haddii ay xaaladdu sii xumaato, mana aha kaliya dhinaca Ukraine balse sidoo kale Lithuania iyo gobolladeenna,” ayuu yiri Wasiirka Gaashaandhigga ee Lithuania, Margiris Abukevich.
“Dadka reer Lithuania ee caadiga ah ma sugayaan NATO. Si wadir ah ayay u dagaallamayaan”. Hadalkaas waxaa tiri haweeney u dhalatay Ruushka oo sharraxaysay sababta ay u caawinayso ciidamada difaaca ee Ukraine.
“Sababta aan anigu u caawinayo waa inaan ceeb ka dareemay kana cabsanayo waxa uu dalkeyga samaynayo. Waxaan isku dayayaa inaan gacan ka gaysto intii karaankeyga ah,” ayay tiri.
Lithuania ayaa sidoo kale lagu dawaynayaa ciidamada Ukraine ee kusoo dhaawacma dagaalka.
Dalalka reer galbeedka ayaa xukuumadda Kyiv garab taagan tan iyo markii uu dagaalka billowday 24-kii bishii February ee sanadkan 2022-ka.
Mareykanka ayaa maanta ku dhawaaqay in uu gargaar militeri oo horleh oo ku kacaya hal bilyan oo dolar u dirayo Ukraine, waxaana qalabkaas ka mid ah gantaallada casriga ah.
Wasiirka Gaashaandhigga ee Mareykanka, Lloyd Austin, ayaa sheegay in uu wax kasta u samayn doono sidii uu u xaqiijin lahaa in Ukraine ay hesho dhammaan hubka ay u baahan tahay.
Daawo Xildhibaan Xambse Cabdi Barre oo loo magacaabay Ra’iisal Wasaaraha Dalka.
Madaxweynaha Puntland oo maanta lagu wado in uu dib ugu laabto Garoowe
Madaxweynaha Puntland Siciid Cabdullaahi Deni oo ku sugan magaalada Muqdisho ayaa lagu wadaa in uu maanta dib ugu laabto caasimadda Garoowe.
Madaxweyne Deni ayaa maalmihii u danbeeyay joogay Muqdisho halkaas oo uu kaga qayb-galay caleema-saarkii madaxweynaha cusub ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud.
Madaxweynaha Puntland ayaa la filaya in uu si rasmiya u furo kalfadhiga 50-aad ee golaha wakiilada Puntland oo lagu wado in uu furmo maalinta berri ah ee ku beegan 15-ka June 2022.
Muxuu yahay ururka EAC ee ay Soomaaliya doonayso ku biiriddiisa?
Dowladda Soomaaliya ayaa ka codsatay Kenya inay gacan ka siiso ku biiridda Ururka Goboleedka Bariga Afrika (EAC), arrintaas oo uu Madaxweyne Xasan Sheekh kala hadlay dhiggiisa Uhuru Kenyatta oo ay todobaadkii hore ku kulmeen Muqdisho.
Sida ay mas’uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya u xaqiijiyeen BBC, Muqdisho ayaa doonaysa in xubinnimada EAC ay uga faa’iideysato xoojinta baayac-mushtarka dalka, si ganacsatada Soomaalida ah ay uga shaqeystaan dalalkaas.
Dalalka xubnaha ka ah EAC ayaa kala ah: Kenya, Uganda, Rwanda, Burundi, South Sudan, Tanzania, iyo Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo. Ganacsatada Soomaalida ah ayaa hanti muuqata ku leh dalalkaas marka laga reebo Burundi.
Muxuu yahay ururka EAC?
Waa urur goboleed xaruntiisu tahay magaalada Caruusha ee Tanzania, kaasoo dhismay sanadkii 2000, kadib heshiis ay gaareen shan kamid ah lixda dal ee uu hadda ka kooban yahay. South Sudan ayaa xubinnimada EAC heshay bishii September 2016, halka Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo ayaa ururkan ku biirtay bishii April ee sanadka.
Soomaaliya ayaa sanadkii 2016 laga diiday codsigeega xubinnimada EAC waxaana ay markale codsi dirsatay sanadkii 2018, ilaa iyo haatanna ma jirto jawaab laga siiyay arrinkaas.
Kenya ayaa kamid ah waddamada ugu awoodda badan ururka, waxaana taageeradeeda ay muhiim u tahay damaca Soomaaliya ee ku biiritaanka EAC.
Qoraalka sawirka,Madaxweynaha Kenya oo ka hadlaya xafladdii caleemo-saarka Madaxweyne Xasan Sheekh
Iskaashiga dalalka xubnaha ka ah
Waddamada xubnaha ka ah EAC ayaa waxa ay iska kaashadaan dhinacyo khuseeya siyaasadda, ammaanka, difaaca, dhaqaalaha, dhaqanka, tiknoolajiyadda iyo sharciga. Dalalka ayaa ku haminaya inay sameeyaan is dhexgal buuxa oo dhinacyo badan.
Dalalka ayaa sanadkii 2005 ku heshiiyay kastam midaysan oo ay alaabaha iyo dadka si xor ah uga kala gooshi karaan waddamada. Shuruudda ku xiran alaabahaas ayaa ah inay ka yimaadaan gudaha waddamada xubnaha ka ah EAC.
Si loo xoojiyo dhaqaalaha waddamada iyo horumarkooda, ururka EAC ayaa sameeyay suuq gaar ah oo shaqeynayay tan iyo 2010. Waddamada ayaa sidoo kale ku haminaya in sanadka 2023 ay samaystaan lacag u gaar ah.
Yoolka ugu weyn ee laga leeyahay urur goboleedka EAC ayaa ah in dalalka xubnaha ka ah ay yeeshaan dowlad ay ku midaysan yihiin.
Midnimada dowladeed ee uu doonayo ururka ayaa waxaa bud-dhig u noqon doona in siyaasad midaysan ay dalalku ka yeeshaan arrimaha ammaanka, gaashaandhigga iyo xiriirka dibedda. Lama sheegin xilliga la gaari doono yoolkaas.
Soomaaliya iyo Congo
Inkastoo Soomaaliya ay codsigeeda ku aaddan xubinnimada EAC dirtay 2018, haddana waxaa laga hor aqbalay Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Congo oo hannaankaas bilowday 2019.
Khubarada ayaa sheegaya in amni darrada ka taagan Soomaaliya ay tahay sababta ugu weyn ee EAC ay uga cago-jiidayso inay aqbasho codsiga xukuumadda Muqdisho.
“Ku biiridda ururkan waxa ay shacabka Congo ka caawinaysaa dhinacyada ganacsiga, ammaanka iyo nabadda,” ayuu yiri Madaxweynaha Congo, Felix Tshisekedi, oo ka hadlayay munaasabadda lagu soo dhaweynayay dallkaasi.
Kadib markii ay Congo ku biirtay EAC, ayaa waxa ay tirada muwaadiniinta hoos taga ururkaas ay gaartay 300 oo milyan oo qof, halka dhaqaalaha waddamadana wadar ahaan lagu qiyaasay 250 milyan oo dollar.
Congo ayaa waxa ay leedahay kheyraad u badan macdan, sida dahabka, deemanka, naxaas iyo kuwo kale, hase yeeshee bariga dalkaas ayaa waxaa hareeyay colaaddo ka dhashay kheyraadkaas.
Yaa saameyn ku yeelan kara magacaabista raysul wasaaraha cusub?
Ilaa iyo hadda, si rasmi ah looma xaqiijin qofka uu noqonayo raysul wasaaraha cusub, waxaana baraha bulshada ee ay Soomaalidu ku wada xiriirto lagu faafiyay magacyada shakhsiyaad kala duwan.
Sida caadiga ah, raysul wasaaraha cusub ayaa lagu soo magacaabaa muddo 30 maalmood gudahood ah, oo ka billaabanaysa marka la doorto Madaxweynaha. Xasan Sheekh ayaa ku guulaystay doorashadii dhacday 15-kii May.
MADAXWEYNE XASAN SHEEKH OO KULAN LA QAATAY WASIIRKA ARRIMAHA DIBADDA TALYAANIGA
Madaxweynaha ayaa xusay saaxiibtinimada taariikhiga ah ee ka dhaxaysa labada shacab ee Soomaaliya iyo Talyaaniga, isaga oo uga mahadceliyey doorka ay ka qaadanayaan dowlad dhiska Soomaaliya iyo in codka ay ku dhex leeyihiin Midowga Yurub ay ku kabaan horumarinta Soomaaliya.Dhankiisa, Wasiirka Arrimaha Dibadda Talyaaniga ayaa Madaxweynaha ugu hambalyeey xilka loo doortay, waxa uuna soo bandhigay sida dowladda Talyaanigu ay ugu garab taagan tahay qorsheyaashiisa hormarineed ee ku qotoma Soomaali heshiis ah, dunidana heshiis la ah.
Qoyska dalka Imaaraadka ka dhigay quwadda saxaraha
Muddo haatan laga joogo Kaliya 50 ayaa loo aqoonsaday inay yihiin koox amiirro qabiil ah oo ku nool saxaraha Jasiiradda Carabta, laakiin hadda ku dhawaad nus qarni ka dib, waxay Isu tagga Imaaraadka ka dhigeen dal leh suuq furan astaanna u ah dhismayaasha dunida ugu dhaadheer.
Caasimadda Dubai ee isu tagga carabta oo 50 sano ka hor teendhooyin, cooshado iyo dhimayaal gaagaaban ka koobneed hadda waxay leedahay dhismayaal caalamka oo dhan looga soo daawasho tago.
Dhulka isu tagga Imaaraadka uu ku fadhiyo oo u badan dhul lama dagaan ah oo geela lagu raaci jiray timirtana laga goosan jiray maanta waxaa xaruumo ku leh jaamacadaha, warshadaha wax soo saarka dunida ugu waaweyn.
Waxaana caasimadda Dubai ku yaalla Huteello casri ah oo tayadoodu sarreyso heerkooduna yahay 7 xiddig (7 star), iyo goobaha laga dukaameysto oo caalmaka ugu waaweyn.
Waxaana intaa dheer Imaaraadka wuxuu ka mid yahay waddamo fara ku turis ah oo dayax gacmeed hawada sare u diray.
Quwad weyn oo caalami ah
Sacuudi Carabiya oo ku yaalla khaliijka xulafana la ah reer galbeedka ayaa ah boqortooyo awood badan oo ka mid ah quwadaha adduunka.
Sheikh Khaliifa bin Zayes bin Sultan Al Nahyaan oo geeriyooday bishii May ee sanadkan ayaa ahaa maskaxadi ka dambeysay horumarka dhan walba leh ee ay ku tallaabsatay iisu tagga imaaraadka wax ka yar nus qarni.
Tan iyo sanadkii 2004-tii ayuu Sheekh Khaliifa ahaa madaxweynaha Imaaraadka, waxaana madaxweynihii labaad ee soo mara waddankan carbeed.
Amiir ama Hoggaamiyaha Abu Dubai ayaa loo arkaa inuu yahay qofka dunida ugu qanisan hormuudkana u ahaa inuu dalkiisa uu ka mid noqdo waddamada caalamka ee horumarka looga tusaala qaato.
Sheikh Khaliifa bin Zayes bin Sultan Al Nahyaan 2014-kii markii uu faalug ku dhuftay ayuu ka fariistay shaqooyinka dowladda uu hayey inkasta oo isagu uu dalka madaxweyna ka sii ahaa sawirradiisana goob walba oo dalkaasi ka mid ah ay surnaayen.
Waxaana Sheekh Khaliifa si weyn loogu ammaanaa dal yar oo weliba saldanado yaryar oo qabiillo ka kooban uu u mideeyey isla-markaana uu uga dhigay mid ka mid ah dalalka ugu muruqa weyn xagga dhaqaalaha.
Sheekh Khaliifa waxa uu haystay mid ka mid ah bortooyooyinka ugu qanisan caalamka, dhaqaalaha qoyskiisuna waxa uu ahaa mid aad u baaxad wayn.
Waxaa la aaminsan yahay in isagu shakhsi ahaan uu lahaa hanti badan oo magaciisa ku astaysan.
Sanadkii 2008-dii, Majalladda ka faalloota arrimaha dhaqaalaha shakhsiyaadka ee Forbes ayaa hantidiisa gaarka ah ku sheegtay ilaa $19 bilyan oo doolar.
Marka laga soo tago shakhsi ahaan, qoyska Al-Nahyan ee boqortooyada dhaxalka u leh ayaa la rumaysan yahay inay haystaan hanti dhan adduun lacageed oo gaaraya $150bn (£123bn).
Isu Tagga Imaaraadka sidey ku aasaasantay?
Dabayaaqadii 1960-kii Britain waxay biloowday iney ka huleesho waddamada khaliijka ee ay guumeysan jirtay.
Ingiriisku wuxuu halkaasi tagay qarni ka hor xilli ay ciidamo ay qabaa’illada leeyihiin ay dhaceen tareen xamuul oo halkaa marayey.
Wuxuu Ingiriiska khaliijka uu u soo diray ciidamo ilaaliya tareenka si aan markale loo dhicin wixii intaa ka dambeeyeyna Ingiriiska wuxuu iskusii balaladhiyey wadamada khaliijka oo dhan.
Markii ay waddamada khaliijka bilaabeen iney saliid la soo baxaanna Ingiriisku wuxuu go’aansaday inuu ka baxa dalkaasi maadaamaa uu arkay iney khatar uga iman karto.
Kaddibna qabaa’illadi dagayey dhul kala qoqoban oo lix imaaradood ka kooban oo kala ah ((Dubai, Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Um-Al-Quwain iyo Fujairah) waxay isugu yimaaddeens shir ay ku midoobayaan.
Bishii December 1971-kii lixdii Imaaradood wey midoobeen oo waxay dhisteen dal madax bannaan oo loo bixiyey Isu tagga imaaraadka carabta. Bilooyin kaddibna waxaa ku soo biirtay Imaarada Ras Al Khaimah sidaa ayaana lagu dajiyey khariidadda UAE.
Madaxweynihi ugu horreeyey ee iisu tagga imaaraadkana waxaa loo doortay Amiirka Abu Dubai Zayed bin Sultaan Al-Nahyan.
Kaddib saliid ayey soo saarteen waxaana dalkaasi u billaabatay qaninimo sababtay iney muwaaddiniinta dalkaasi ku noolaa oo dhan ay lacageystaan.
Waddamada Khaliijka sida Sacuudi Carabiya, Cumaman, Qadar, Baxrain iyo Kuweyt iyaguna waxay mareen waddo taa la mid ah.
Isu tagga Imaaraadka Carabta maanta wuxuu ka mid yahay quwadaha dhaqaalaha ee dunida ka muuqda siyaasadda bariga dhexe iyo dunida muslinkana sameyn ku leh.
Dhaqaalaha ugu badan ee dalka Iisu Tagga Imaaraadka wuxuu ku dhisan yahay Saliidda halka ganacsiga iyo dalxiiskana ay ku jiraan kaalamaha labaad iyo seddexaad.
Imaaaraadka Carabta horumarka dhaqaala iyo suuqa furan ee ganacsiga oo lagu ammaano marka laga soo noqdo waxaa lagu dhaliilaa arrimo la xidhiidha xuquuqda aadanaha.
Qoraalka sawirka,Sheikh Maxammed bin Zayed bin Suldaan Al Naxyyaan
Waxaana dalkaasi lagu tilmaamaa inuu xuquuqda muwaaddiniinta uu dhowrin ahmiyadna ay siinin. Xorriyadda saxaafadda ayaa ah mid xaddidan.
Ciddi nidaamka dowladda Imaaraadka dhaliisho waxay la kulmeysaa xarig iyo dil.
Warbixin ay Amnesty International soo saartay 2012-ka waxay ku sheegtay Imaaraadka iney ka dhacen xarig wadareed, macabiista oo xadgudub baahsan loo geysto iyo xorriyadda saxaafada oo aad u liidato.
Kaniiniga paracetamol-ka oo la ogaaday inuu hoos u dhigo awoodda raganimada
Daraasad cusub oo shaaca laga qaaday ayaa lagu sheegay in kiimikooyin dhowr ah oo soo gala jirkeenna, sida maaddada bisphenol A (BPA) iyo sunta dioxin, kuwaasoo ku jira waxyaabaha aan sida joogtada ah u isticmaalno, ay sababaan inay hoos u dhacdo tayada awoodda raganimada.
Cilmi baaristan, oo lagu daabacay Majalladda “Environment International”, ayaa lagu baaray ilaa 9 kiimiko oo sidoo kale uu ka mid yahay xanuun baabi’iyaha sida wayn loo isticmaalo ee paracetamol-ka.
Waxaa kale oo kiimikooyinkan ku jira maaddada phthalate ee loo adeegsado jilcinta waxyaabaha ay ka mid yihiin caagagga biyaha lagu shubto.
Khubarada ayaa sheegay in isku darka kiimikooyinka ay ka kooban yihiin walxahan ay saamayn ku yeeshaan habka ay u shaqeeyaan unugyada taranka ragga ayna yareeyaan awoodda shahwada.
Daraassaddan, oo markii la sameynayay la isticmaalay kaadi laga qaaday 98 nin oo ay da’doodu u dhaxayso 18 ilaa 30 sano oo ku nool dalka Denmark, ayaa lagu ogaaday in kiimikada ugu halista badan ay tahay maaddada BPA oo loo isticmaalo qalab badan oo ay ka mid yihiin caagagga biyaha lagu shubo, caanaha warshadeysan iyo konteenarrada yar yar ee raashinka lagu qaato.
Cilmi baaristan ayaa sidoo kale lagu ogaaday in unugyada taranka ee ragga ay billowdaan marka ay wali ku jiraan uurka hooyada. Sidaas awgeed waxay saamaynta soo gaari kartaa haweenka uurka leh ee sida carruurta labka ah.
Arrin muddo dheer taagnayd
Cilmi baareyaasha dabagalka ku samaynayay tayada shahwada ragga aya amuddo dheer ka hor fahmay in uu jiro hoos u dhac.
Sanadkii 2017-kii ayaa wargays ka faallooda taranka bani’aadanka lagu daabacay natiijada 200 oo daraasadood oo laga sameeyay Waqooyiga Ameerika, Yurub, Australia iyo New Zealand, taasoo lagu ogaaday in tirada unugyada taranka ragga ay yaraatay 50% muddadii 40-ka sano ahayd ee lasoo dhaafay gudaheeda.
Taas waxaa sii dheereyd in dhakhaatiirta khubarada ah qaarkood ay sheegeen in haddii hoos u dhaca uu sii socdo uu samayn ku yeelan doono kororka tirada dadka caalamka.
Waxay saynisyahannadu hoosta ka xariiqeen in arrintani ay kusii darsantay cudurrada ku imaada galmada oo muddooyinkii dambe aad u batay.
Daraasadda ugu dambaysay oo ay isbuucii lasoo dhaafay daabaceen dhakhaatiir iskaashaday oo ka kala socday UK iyo Denmark, ayaa muujisay in kiimikooyinka saamaynta ku yeesha unugyada taranka ay hadda yihiin waxa ugu wayn ee walaaca keenaya.
Sida uu qoray wargayeska “The Guardian”, Barfasoor Andreas Kortenkamp oo ka tirsan Jaamacadda Brunel ee waddanka England, oo daraasaddan ka shaqeynayay tan iyo markii la billaabay, ayaa sheegay in natiijada ay ahayd mid lama filaan ah, ayna aad ula yaabeen khatarta ay leeyihiin kiimikooyinka la baaray.
Natiijo aan la isku wada raacsanayn
Dhammaan khubarada ku xeel dheer cilmigan iskuma wada raacsana natiijada kasoo baxday daraasaddan cusub ee la shaaciyay.
Waxaa jira qaar aan la dhacsanayn, oo sheegay in hoos u dhaca tayada taranka ragga ay sabab u yihiin waxyaabo kale oo aan ahayn kiimikooyinka lagu xusay daraasadda.
Kuwo kalena waxay sheegeen in kiimikooyinka liiska daraasadda ku jira ay yihiin kuwo xaddidan oo ka yar tiradii loo baahnaa in la baaro.
Intaas waxaa sii dheer inaan ilaa hadda la ogayn inta ay la egtahay khatarta ay dumarka ugu jiraan kiimikooyinka loogu kuur galay daraasaddan.